Talo-siinta Blog-ga: Netglobalbooks | Martech Zone
Talo-siinta Blog-ka: Netglobalbooks
Khamiis, Juun 19, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Liistada ku xigta ee liiska ku-qorista balooggu waa Linda Lee iyo blog-ka Netglobalbooks. Linda waa ganacsade iyo hooyo kaligeed leh 3 caruur ah oo waa weyn. Linda waxay bilawday inay ku iibiso buugaag iyo caruusadaha iyo tigidhada riwaayadaha eBay, taasina waxay horseed u tahay qorista iyo iibinta buugaagta iyo abuurida degello internet ah.
Barta Linda waa mid qurux badan - oo ay ku dheehan tahay mawduuc rinji ah oo loo yaqaan 'Antbag'.
Waa kuwan Talooyinkaaga Blog, Linda:
Waxaan kugula talin lahaa inaad casriyeeyso noocaaga WordPress nooca ugu dambeeyay uguna weyn.
Waxaan ka helay dhowr waxyaalood oo qariib ah mawduucaaga. Boggaaga ugu muhiimsan, boostadaadu waxay ka bilaabmaysaa> p /> waxaadna moodaa inay jiraan astaamo qoraallo sumcad xumo ah oo dib isu soo celinaya ka dib qoraal kasta waxyaabaha uu ka kooban yahay.
Waa inaad awood u yeelatid inaad kuhesho sumadda khaldan ee qoraalka adoo hagaajinaya boggaaga muhiimka ah ee kujira tifaftiraha mawduuca WordPress. Calaamadaha xiisaha leh waxaa laga yaabaa inay ku jiraan waxyaabaha aad ka kooban tahay.
Waxaad kuheshay iskuxiraha dhintey gole kuqoran boggaaga dhexdiisa. Haddii aad rabto gole ka shaqeeya WordPress, waad isku dayi kartaa bbPress. Saaxiibkeyga blogging-ka ah Tony Chung ayaa ku raran oo si fiican ugu socda bartiisa, Geekwhat.
Waxaan ogaanayaa markaad wax qoraysid inaad leedahay iskudhaf sumado (> p>) iyo xariiqyo jaban (> br />). Jebinta xariiqda ayaa jabin doonta khadka oo kugu sii wadi doonta khadka xiga iyada oo aan lahayn suuf ama gees. Baaragaraaf; si kastaba ha noqotee, wuxuu ka tagayaa xoogaa suuf wanaagsan oo ka sarreeya iyo ka hooseeya sadarkaaga waxyaabaha ku jira. Baaragaraafka ayaa si fiican u kala jebinaya waxyaabaha ku jira - taas oo ka dhigaysa waxa aad ka kooban tahay mid si sahlan loo akhriyi karo. Waan iska ilaalin lahaa qadka nasashada.
Ma jiraan wax sumado xogta sumadeed ah oo ku jira madaxaaga. Xogta Meta waxaa adeegsada Mashiinnada Raadinta si ay u soo bandhigaan ereyga muhiimka ah iyo faahfaahinta macluumaadka ku saabsan bartaada iyo bog kasta oo ka mid ah bogaggaaga. Waxaan kula talin Rakibidda dhowr xirmooyin si ay kaaga caawiyaan dejinta ereyada muhiimka ah iyo sharraxaadda 'meta tags'!
Sumaddaada RSS RSS ayaa si wanaagsan u taagan! Si loo hubiyo inaad ku soo jiidanayso aqriskaaga RSS quudinta, waxaan kugula talin lahaa inaad iska qorto FeedPress iyo rakibaadda barnaamijka 'Feedburner WordPress'.
Si aad uga caawiso Mashiinka Raadinta ee marin haynta bartaada wax aad u fudud, waxaan aad ugu talin lahaa in la rakibo a Qalabka koronto-dhaliyaha Khariidadda bogga. Waxa aan ugu jeclahay runti waa nooca beta - si fiican ayey u socotaa weligeyna wax dhibaato ah ma qabin. Maaddaama balooggaagu ku jiro qayb hoosaad, markaad dhisayso khariidadda boggaaga hubi inaad cusboonaysiiso faylkaaga robots.txt oo leh meesha laga helayo:
khariidadda bogga: http://netglobalbooks.com/blog/sitemap.xml
Haddii dhibaato kugu dhacdo, iska qor Raadinta Raadinta Google si aad u hesho tilmaamo!
Waa kuma Linda Lee? Aaway sawir? Aaway wax sawiro ah? Blogging-ku waa waayo-aragnimo muuqaal ah sida akhriska oo kale. Dadku waxay u muuqdaan inay si fiican ugu xirmaan dadka, ma ahan qoraalka. Ma lihi sawir madaxayga maxaa yeelay waxaan ahay nin narcissist ah… halkaas ayaan ku hayaa si aad u xasuusato wejigeyga oo aad wax yar iga aaminto.
Waxaan sidoo kale ku firdhin lahaa qoraaladaada clipart ama sawirro si aan uga soocno baloogyada kale isla markaana aan u siiyo aragti yar oo ku saabsan waxyaabaha aad ka kooban tahay. Ka faa'iideyso xabadaha iyo madaxyada (h2, h3) gudaha mawduucaaga si akhristayaasha ay ugu sahlanaato.
Linda, waxaad kuheleysaa shaqo fantastik ah boog dhalinyaro ah. Uma baahnid inaad dhammaan kuwan horumarineed ku tuurtid hal habeen - qaado waqtigaaga. Waxay u muuqataa inaad ku raaxeysaneysid qoraalkaaga waana shaqsi iyo wargelin. Sii wad oo ku dar dhowr ka mid ah dib-u-habeyntaas waqti ka dib - waxaad ka heli doontaa kobcin akhriska iyo helitaanka mashiinka raadinta.
Nasiib wanaagsan! (Laga soo bilaabo Aabe Kali ah!)
Tags: tilmaamid blogtalooyinka blogLindanetblobalbooks
Jul 19, 2007 markay tahay 10:35 PM
wow doug, waan soo dejistay sheyga dhaliyaha khariidada mareegaha waana wax laga naxo, waxaan horeyba ugu diray maabka mareegta google, waxay umuuqataa inay sifiican ushaqeyneyso si kafiican marlabaad latalintaada… sidoo kale waxaan isbadal kusameeyaa barteyda, kadib markaan aqriyey waqtigaaga tippings blog, Waxaan u maleynayaa inaan sii fiicnaanayo 🙂
Jul 19, 2007 markay tahay 11:16 PM
dhagaxyada bbpress! mahadsanid sheegida Doug!
Jul 20, 2007 markay tahay 7:00 PM
Wow waad ku mahadsan tahay dhammaan caawimaadda iyo xiriiriyeyaasha weyn iyo soo-jeedimaha.
Waxaan ka shaqeeyay qaar ka mid ah kuwa maanta iyo Im oo ka shaqeynaya sawir, waana cusbooneysiiyay boggeyga.
Waxaan rakibayaa sheyga aad kula talisay waxaanan kugu sameeyay gelitaan blog adiga kugu saabsan!
Adiguba sidoo kale waxaad kujirtaa liiska duubista blogkayga hada.
Waad ku mahadsan tahay mar kale wax walba!
Jul 21, 2007 markay tahay 2:09 PM
Aad baad u soo dhaweyneysaa Linda! Aad baad ugu mahadsantahay inaad igu dartay blogroll - taasi waa amaan !!!
Jul 26, 2007 markay tahay 2:46 PM
Kaliya waxaan iibsaday buug ku saleysan xulashadaada.
Weligay ma maqal ninkan waxaanan aqriyay faallooyinka 'Amazon' waana kan buuggayga noocan ah. "Filo wax aan la filayn"
(Waxaan u tegey eBay oo aan iibsaday, waan ka xumahay taas) laakiin waxaan ku dhejiyay degelkeyga sidoo kale iibinta iyada oo loo marayo Amazon.
Sep 28, 2007 at 3: 55 PM
Roger wuxuu leeyahay blog ah, sidoo kale! Waa nin runtii madadaaliya. Waan jeclahay buuggaas gaarka ah, in kastoo!
Waad ku mahadsantahay inaad i ogeysiiso!